I-Huawei iqinisekisiwe njengomenzi wesibini wee-smartphones kwihlabathi liphela | I-Androidsis
UIgnacio Sala | | Huawei, Izaziso
Ekuqaleni kuka-Agasti, bobabini uApple noHuawei bazise amanani abo asemthethweni okuthengisa itheminali kwikota yesibini yonyaka, amanani asibonisileyo ukuba inkampani yaseAsia iHuawei wayifezekisa injongo eyayibekwe kwiminyaka embalwa edlulileyo: ube ngumenzi wesibini ngobukhulu we-smartphone emhlabeni, ukogqitha iApple.
Kodwa, amanani anikezelwa yinkampani kuye kwafuneka aqinisekiswe ziinkampani zohlalutyo ngaphandle kwenkampani, ukuze kuqinisekiswe I-Apple yayiwele kwindawo yesithathu ngokweentengiso zentengiso. Lo mzuzu ufikile emva kokupapashwa kwengxelo yakutshanje nguGartner.
Ngokwengxelo yakutshanje, siyabona ukuba uHuawei uhambe njani ekuthengiseni ii-smartphones ezizigidi ezingama-36 kwikota yesibini yonyaka ophelileyo ukuya phantse kwizigidi ezingama-50, ukufikelela kwisabelo sentengiso se-13,3%. Ngokwenxalenye yayo, iApple ikwazile ukonyusa inani lokuthengisa ngexesha elinye ngeeyunithi ezingama-400.000 kuphela, ezinesabelo sentengiso se-11,9%.
KwiSamsung ayizizo izinto ezihamba kakuhle kakhulu, kuba kwangelo xesha linye ithengise i-10 yezigidi ze-smartphones, nangona ihlala iyinkokeli kolu luhlu ngokusikwa kwe-19,3%. UXiaomi, umenzi wee-smartphones kwihlabathi liphela, ukwabone inani leeyunithi ezithengisiweyo zonyuke nge-11 yezigidi, kunye nesabelo sentengiso se-8,8%.
Ukuqonda ezi datha kufuneka sizithathele ingqalelo izinto ezininzi:
Zombini iXiaomi kunye neHuawei ngamaTshayina, ilizwe apho imarike ephambili ikhoyo Abathengi kunye nelona nani likhulu lokuthengisa, kungoko u-Oppo ngumenzi wesihlanu othengisa ezona smartphones kwihlabathi liphela.
E-United States, ubukho beHuawei kunye neXiaomi bubungqina.
I-Apple ithengisa kuwo onke amazwe ehlabathi kunye nakwicandelo lesibini kunye nelesibini kwikota yesithathu yonyaka ngawona mathuba apho kuthengiswa khona iitheminali.
Isamsung inobungqina eTshayina Ngenxa yobukho beempawu zalapha ekhaya ngexabiso elihle kakhulu, nangona isenza iintshukumo ukuzama ukubuyisa inxenye yentengiso.
Ukuze wazi ukuba uHuawei ekugqibeleni ugqithile kwi-Apple njengomenzi wesibini wee-smartphones emhlabeni, kufuneka silinde unyaka uphele apho kuboniswa khona iikota ezine, kuba umenzi ngamnye esungula ii-terminals zakhe kwimihla eyahlukeneyo kwaye ngokubanzi ihambelana neencopho zentengiso ephezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » I-Huawei iqinisekisiwe njengomenzi wesibini wee-smartphones kwihlabathi liphela
Ngoku unokukhuphela isiqalisi sePixel esingenasiphelo kwiGoogle Play Store
UDragalia Lost ngumdlalo olandelayo weNintendo oza kuwusungula ngoSeptemba 27 weselfowuni